ကိုပေါက်ရဲ့မှတ်စုလေးများ..: January 2010
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 3:49 AM
လှသော အမျုိးသမီးများအား အစုလိုက်အပြုံလိုက် မုဒိမ်းကျင့်သော ဖြစ်ရပ်တခု မလေးရှားနိုင်ငံ ဂျိုဟိုးပြည် နယ်တွင် မယုံကြည်နိုင်လောက်စရာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံအသီးသီးမှရောက်ရှိပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေထိုင်ကြသော မိန်းကလေးများစွာ ရှိနေပါသည်။
Taman Putri Wangsa Jalan Istimewa 7. No16 Kilang E.W တွင် အလုပ်လုပ်နေသော မိန်းကလေးများအား အစုလိုက်အပြုံလိုက် မုဒိန်းကျင့်မှု တခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ တစောင်ဖြစ်သော STAR သတင်းစာတစောင်ကတော့ အထ မမြောက်ခဲ့သော ကာအိနြေ္ဒပျက်ရုံလောက်သာ ဖြစ်ခဲ့သည့် မုဒိမ်းကျင်ရန်ကြံစီမှုအဖြစ် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ (The women, who were all in their 20s, were later ordered to strip but his attempt to rape them was unsuccessful and he left soon after. The star link http://news.asiaone.com/News/AsiaOne%2BNews/Crime/Story/A1Story20090911-167164.html အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပုံမှာ (၂၈.၈.၀၉) နေ့ မနက် ၂ နာရီ အချိန်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ထိုနေ့မ တိုင်ခင်ကထဲက မိန်းမများသီးသန့်နေထိုင်ရာ ထိုအိမ်အနီးသို့ မလေးရှားနိုင်ငံသားမှ ရောက်လာပြီ ဘောင်းဘီဇစ် များ ချွတ်ပြခြင်း၊ မဖွယ်မရာများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကြောင့် မိန်းကလေးများက သက်ဆိုင်ရာ အေးဂျင့်သို့ တိုင်ကြား ရာ မြန်မာအေးဂျင့်မှ ပြရင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟု မချေမငံ ပြန်ပြောခဲ့ကြောင်းကို စုံစမ်းသိရှိရပါသည် ။
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများ NGOs နှင့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများကလည်း သူတို့နိုင်ငံ သူတို့လူမျိုးနှင့်ပတ်သတ်လာလျှင် လက်ရှောင်ချင်ကြသည်မှာအထင်အရှား နှုတ်ဆိတ်နေချင်ကြသည်မှာ သိသာလွန်းလှပေသည်။
ဒါကြောင့်မြန်မာမလေးများအနေဖြင့် သူတစ်ပါးနိုင်ငံကိုအထင်ကြီးလွန်ပြီး မဆင်အခြင်သွားကြခြင်းများ မလုပ်သင့်ပါ...မလေးရှားနိုင်ငံဆိုသည်မှာ ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုတောင်မလွတ်လပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး.. ကမ္ဘာပေါ်မှာအရက်စက်ဆုံး ခွေးကုလားများ အုပ်ချုပ်နေထိုင်ရာ နေရာဖြစ်သောကြောင့်လဲ မသွားသင့်ကြပါ... ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုပြီး အထင်ကြီးနေသူများအတွက် ဒီမိုကရေစီရတယ်ဆိုတိုင်း လွတ်လပ်စွာ တခြားလူမျိုးများကို လူမျိုးခွဲအနိုင်ကျင့်ချင်သည့်စိတ်ဓါတ်ရှိသော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံသားနှင့် ယှဉ်လာလျှင် နိုင်ငံသားဘက်ပဲပါတတ်သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတို့ရဲ့ အကျင့်တွေကို ခံရနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်..
မြန်မာပြည်မှာ ကြီးပွားချင်နေကြသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးများ အတွက်ကိုယ့်ဘ၀အတွက် လုံခြုံမှုမရှိသည့်နေ၇ာများတွင် အလုပ်မလုပ်ကြရန်... ကြီးပွားချမ်းသာချင်ပါက အမှန်တကယ်ကြိုးစားပြီး ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာမှာပဲ ကြိုးစားသင့်ကြောင်းသတိချပ် စေချင်ပါတယ်..
အခြေအနေအခက်အခဲတို့ကြောင့် အကြောင်းတစုံတရာဖြစ်တိုင်း ကယ်ကူသူမဲ့နေ ရသည့် မိမိတို့မြန်မာလူမျိုးများအဖြစ်က ရင်နာစရာ ကောင်းလှပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
ငွေ၅သိန်းလူယူသူ ဓါးပြ နှစ်ဦးရဲကားနှင့်တိုက်မိကာဖမ်းမိ...
IPOH: Sports Toto အရောင်းဆုိုင်တွင် ရင်းဂစ်ငွေ ၅သိန်းလုယူသွားသော ဓါးမြများအား ရဲကားဖြင့် လုိုက်ရာ ၂ဦးကုို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ကျန်ရှိနေသော ၃ဦးအား ဆက်လက်ရှာဖွေ
ဖမ်းမိထားသော တရားခံနှစ်ဦးမှာ အသက် ၂၀မှ ၃၀အတွင်းရှိပြီး ယမန်နေ့နေ့ လည် (၂)နာရီခန့် က ရဲကားများနှင့် လုံးထွေးတုိုက်မိရာမှ ဖမ်းမိခြင်းဖြစ်ပြီး တရားခံဟု ယူဆရသူနှစ်ဦးနှင့် ရဲများပါ ဒါဏ်ရာ အနည်းငယ်စီ ရရှိခဲ့သည်။
ရဲများက ဖမ်းဆီးရမိသော အိတ်နှစ်လုံးအတွင်းမှ ငွေနှင့် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းဆီမှ ဓါးမြများ လုယူသွားသော သေနတ်တစ်လက်တုို့ ကုို ပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သည်။
လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းဖြစ်သူ အသက် (၅၇)နှစ်အရွယ် Ibrahim Ramli က ၄င်းနှင့်အတူ လုပ်ဖေါ်ကုိုင်ဖက်များ ဂိမ်းကစားရာဆုိုင်သုို့တနေ့ တာဝင်ငွေကုို လာရောက်သိမ်းယူ ရန် ၀င်ရောက်လုိုက်စဉ် လူ(၄)ဦး အနီးကပ်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း ပြောပြသည်။ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှာ လက်တွင် ထိရှဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး အခြားတစ်ဦးမှာ ၀မ်းဗုိုက်နှင့် ပေါင်တုို့ တွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ထုို့ နောက် ဓါးမြများသည် ဗန်ကားထဲတွင် ပါလာသော ငွေအိတ်နှစ်အိတ်နှင့် သေနတ်တုို့ ကုို လုကာ ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်ဟု လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများက ပြောဆုိုသည်။
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 6:34 AM
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 6:54 AM
မြန်မာ မိန်းခလေး တွေ သတိချပ်ကြပါ...
ဂျော်ဒန် နိုင်ငံ မြို့တော် အမ္မန်မြို့အနီးရှိ Century Miracle Co.Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အလုပ်သမားများ၏
စတင်ရန်ရှာမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာမှ ဆန္ဒပြခဲ့သည့် မြန်မာ အလုပ်
သမ ၆၀၀ ကျော်သည် ဖိအားပေးအကျပ်ကိုင်မှုများ၊ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအခြေအနေများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ထိုစက်ရုံမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အလုပ်သမားများသည်
မြန်မာအလုပ်သမ များကို တွေ့သည့်နေရာ၌ ရန်မူနေ သဖြင့် အလွန်တရာ စိုးရိမ်နေရကြောင်း မြန်မာအလုပ်သမ တဦးဖြစ်သူ မအိအိခင်က ဧရာဝတီသို့ ယနေ့ တွင် ပြောသည်။
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 6:47 AM
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 7:00 AM
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 5:56 AM
ငွေ၅သိန်းလူယူသူ ဓါးပြ နှစ်ဦးရဲကားနှင့်တိုက်မိကာဖမ...